Wholesale Deluxe Foldable Yakaderera Kumashure Boat Seat Manufacture uye Fekitori |XGEAR
Iyo XGEAR deluxe foldable yakaderera kumashure chikepe chigaro uchishandisa UV-yakarapwa Marine-giredhi vinyl saka yakasimba zvakakwana kutsungirira makore ekushandiswa zvinorema.Iyo anodized-aluminium hinges ikareruka uye inopesana nekuora, iyo yakakwirira-inobata jekiseni yakaumbwa chigaro chepurasitiki furemu ine rupo rwepamusoro-kumanikidza foam padding inogona kukupa iwe wakasununguka kugara kunzwa.
● Iyo chigaro chebhoti chechigaro chakagadzirwa kubva mumvura-giredhi vinyl upholstery uye compression furo cushion.
● Iyo gobvu furo padding pachigaro uye kumashure makushioni anopa incredible nyaradzo.
● Inopindirana ne ergonomic design pfungwa uye yakachengeteka uye yakasununguka kugara mairi.
● The Aluminium alloy hinges uye jekiseni rakaumbwa chigaro chepurasitiki furemu yakasimba.
● The backrest inopeteka, unogona kuipeta pasi wobva wabhatanidza tambo dzekusungirira kana usingashandisi.
● Inokwana mwero 5"x 5" inokwirisa bhaudhi pateni, iri nyore kuisa pane chero standard 4-bolt swivel kana pedestal, chigadzirwa chega chega chichasanganisira 4 Stainless simbi yekuisa screws.
● Haina mvura, iri nyore kuchenesa, ingoipukuta nemucheka wakanyorova uye inokurumidza kuoma.
Product Feature Foldable yakaderera backrest
Product Dimensions 16"W x 14"D x 19"H
Seat FoldingDimensions 16W x 14"D x 14"H
Boat Seat Net Weight 4.7KG
Carton size 17”W x 15” D x 15”H
CartonGros Weight 5.5KG
Tine Zvose zvishanu zvakasiyana-siyana zviripo zvekusarudza: White / Blue, White / Red, White Black, Black / Red, Light Green.Iyi 5 fashoni musanganiswa wemavara anogona kuzadzisa zvaunoda zvakasiyana.
Iyo XGEAR yakagadzirirwa kuwedzera kupfava kwechimiro uye kunyaradza kuchikepe chako, zvichabatsira kuita kuti zuva rako pamvura riwedzere kunakidza.Zvese zvigadzirwa kubva kuXGEAR zvese zvakavakwa kubva kune yepamusoro zvinhu zvekusimba uye kusimba, ese edu ezvikepe zvigaro zvinogadzirwa kuti zvibate kuoma kwenzvimbo yakaomarara yegungwa uye mararamiro ako.
Zvakapfuura: XGEAR Padded High Back Foldable Camping Chair ine Cup Holder Hard Armrest
Zvinotevera: Chero kupi Tafura Tennis Sets ine Retractable Net
Foldable High Back Hove Boat Seat ine High-...